astra.today Xidigiska Saadaasha July 2021 Wixii Dhammaan Calaamadaha Zodiac
Language Dhammaan 108 Ελληνικά English Dansk Deutsche Español Français Italiano Nederlands Norske Português Suomalainen Svenska Shqiptare Eestlane Gaeilge Lietuvis Magyar Polskie Română Slovák Slovenščina čeština Afrikaans Kreyòl ayisyen Esperanto Pilipino Fryslân Galego Hausa Ōlelo Hawaiʻi Hmong Igbo bahasa Indonesia Íslenska Wong jawa Català Kinyarwanda Қазақ Кыргызча Corsu Hrvatski Kurdî Latine Latvietis Lëtzebuergesch Malagasy Malei Malti Maori Cymraeg Faasamoa Funtsean Sugbuanon Sesotho Gàidhlig na h-Alba Soomaali Shona Kiswahili Sunda Türk Türkmenler O'zbek Chichewa Tiếng Việt Bosanski Yoruba Qhubeka Zulu Pусский български Український Српски Azərbaycan dili Беларуская Монгол Славомакедонец Татар Тоҷикӣv 日本の עברית ქართველი 한국어 አማርኛ عربي հայերեն 简体中文 中國傳統的 ગુજરાતી हिन्दी ខ្មែរ ಕೆನಡಾ ຄົນ മലയാളം मराठी नेपाली ଓଣ୍ଡିଆ ଅରିଜିୟା | پیسټو ਪੰਜਾਬੀ فارسی سنڊي සිංහල ไทย தமிழ் తెలుగు ئۇيغۇر اردو বাংলা יידיש
Live Support Gargaarka Xiriir
Xidigiska Xiddigiska Falanqaynta Waxsheegga Magazino
Maanta waa maalintii la yeelan lahaa shirar wacan oo lala yeesho sheekooyin xiiso leh, kuwaas oo u dhaca si niyad sami iyo naxariis leh. ... Inbadan
Daalku waa wax caadi ah maanta, maxaa yeelay qofka qaata waxaa lagu qasbi doonaa inuu qarash gareeyo sababo xirfadeed awgood. Dhinaca kale, wuxuu si joogto ah ugu jiri doonaa cadaadis saaxiibadiisna ma dabooli doonaan dalabkiisa. Maalinta ayaa ku xun bilowga cusub, maxaa yeelay waxay muujineysaa in qofku daalan yahay, faa iidooyin badanna uusan lahayn.
Xirfadle: Wadahadalkaaga dadka kale maanta wuxuu soo bandhigi doonaa xoogaa dhibaatooyin ah. Xiriiryada shaqsiyeed ama xitaa wada xaajoodka ayaa sida ugu wanaagsan dib loo dhigaa. Si kastaba ha noqotee, waa inaad diirada saartaa feejignaantaada waajibaadkaaga ruuxiga ah, oo waliba u baahan edbin. Qorshee qorshayaashaada hanka leh maalin kale markay dhaqdhaqaaqan meeraha ahi dhammaado. Ka adkaato fikirka xun. ... Inbadan
Wadahadal wax ku ool ah iyo wadahadal waa astaamaha maalinta. Dhibaatooyinka laga yaabo inay hore u jireen iyo is faham la’aanta awgeed ayaa la xaliyaa. Xirfadle: Shaqada ruuxiga ah, abaabulka iyo gorgortanka, waa sedexda eray ee kugu daboolaya howlahaaga hada jira. Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah horumarka ayaa keenaya kan kale iyo natiijo wax ku ool ah ayaa qadarinaysa fikirka, abaabulka iyo heshiisyada wanaagsan. ... Inbadan
Maanta waxaa laga yaabaa in xoogaa isbeddel ahi ku yimaado niyaddaada iyo cilmu-nafsigaaga, sababtoo ah la xiriirka qof kale. Waxaa jira suurtagalnimada war wanaagsan oo ka yimaada qofka. ... Inbadan
Maalin xun oo bilawga ah oo aan la aqbali karin iibsashada mashiinada, gaadiidka iyo walxaha korantada. Waxaad kaheli kartaa dib ucelin deegaankaaga ah, taas oo keeneysa dib udhaca arimahaaga, oo waliba laxiriira dadka kale. Waa inaad isku daydaa inaad hadaf yeelato, inaad naftaada gasho meesha dadka kale oo aadan u ogolaan neerfahaada inay qaataan meesha caqligalka. Xusuusnow in marar badan daruuri aysan aheyn khaladaadka kuwa kale dib u dhac ama natiijo xun. Waxbaa laga yaabaa inay iyaga ku dhacday iyagana.
Xirfadle: Ka taxaddar heshiisyadaada maanta. Xaqiiqdii maaha mid ka mid ah maalmaha ganacsigaaga wanaagsan. Qof kastaa wuxuu rabaa inuu kula shaqeeyo dartiis soo dhaweyn aad u hooseysa darteed, laakiin taasi wax u tari maayo danahaaga. ... Inbadan
Xaqiiqdii, iyadu! Waa maalin wadahadal, shirkad iyo isgaarsiin. Maalinta ma jecla wax kasta oo muhiim ah, laakiin waxay kaa dhigeysaa inaad u baahato inaad ku lumiso waqtiga, sameynta iyo ka wada hadalka waxyaabo badan oo aan qiimo lahayn. Xidhiidhka lala yeesho dumarka badanaa waa laga door bidaa.
Xirfadle: Sababta oo ah jawigaaga ayaa xukumi doona maskaxdaada, waxaa ka xigmad badan inaad soo uruuriso macluumaadka halkii aad go'aan ka gaari lahayd. Si kastaba ha noqotee, markaad ogaato faahfaahinta, maskaxdu way nadiifsan tahay oo falcelinta ayaa caqli gal ah. ... Inbadan
Wadahadalka ka dhici doona heer kasta ha noqdee mid shaqsiyeed ama mid saaxiibtinimo ama mid xirfadle ah ayaa noqon doona mid wax ku ool ah waxayna kaa caawin doontaa inaad gaarto go'aanno wanaagsan.
Xirfadle: Is-fahamkaagu aad buu u xoogan yahay waadna ogtahay waxaad rabto. Waxaad sidoo kale ogtahay inaad waxbadan ku guuleysan kartid la shaqeynta dadka kale. Dhamaan shaqooyinka iyo gorgortanku maanta sifiican ayey u socon doonaan. ... Inbadan
Is-waafajinta deegaanka ayaa ka maqan xiriirkuna wuxuu keenaa neerfayaasha. Waad xanaaqsan tahay dadka kale daraaddood waxaadna u aragtaa inaadan dan ka lahayn waxa ay kugu sheegayaan.
Xirfadle: Maskaxdaada shaqo kuma lihid maanta waxaadna u janjeerataa inaad tanaasul sameyso xitaa meesha aan looga baahnayn. Laakiin waxaa laga yaabaa inaad ka qoomameyso goor dambe. Gaar ahaan haddii aad is dhiibto wax adiga muhiim kuu ah. ... Inbadan
Maalin wanaagsan oo go'aanno la gaaro. Maanta waxaa jira masuuliyad mana ku duuleyso daruuraha, taa bedelkeed waxaad si fiican u ogtahay meesha aad ku socoto. Maanta waxaad ka heli kartaa xoogaa caawimaad muhiim ah, si aad u fuliso ujeedooyinkaaga, qof awood leh ama qof waayeel ah.
Ganacsi: Waa maalin wanaagsan in la sameeyo isbedello in badan la sugayay. Qorshayaasha shaqo ee u baahan maskax furan iyo maalgashi wanaagsan oo mala-awaal ah waa inay sugaan hadhow. ... Inbadan
Maanta waxaad isla markaaba uga jawaab celineysaa si sax ah waxkastoo kugu dhaca adiguna waad sheegan kartaa sida ugu wanaagsan ee aad awoodid maalintan. Bilaabidda ayaa loo xagliyaa iyo sidoo kale iibsashada makiinado, gaadiid iyo walxaha korantada.
Ganacsi: Waa maalin wanaagsan in la shaaciyo qorshooyin ilaa iyo hadda aad ka cagajiideyn inaad shaaca ka qaaddo. Difaac fikradahaaga oo maxaad u codsan weyday koror. Gorgortanka ayaa la door bidaa haddii aad diyaar u tahay inaad qatar gasho si aad u gaarto waxaad rabto. ... Inbadan
Macluumaadkaagu hubaal wuu fiicnaan doonaa. Indhahaagu waa afar iyo toban: fursadaha maqalka wax aad xiisaynayso oo aad aad u sarrayso oo - tan ugu muhiimsani tahay - waxaad ku ogaan kartaa fursad qaar ka mid ah erayada wada-hadalkaaga. ... Inbadan
Wixii Tamarta, Qashinka, Cad, Raaxo, Jirka, Nasiib, Sanadka, Beddel, Waxyi, Hanti!
Dhalasho Falanqeyn iyo Khariidad
Saadaalinta Smart at jaleecada! Isgoysyada.
Saadaasha Wixii Dhammaan
Dhalashada Horoscope, Horumar, Isgoysyada, Sinastry, Horumarka Synastria, Xarunta, Wadooyinka loo maro.
Transit-kaaga ee waqtiga dhabta ah
Isgoysyada iyo Dhalasho.
Ku abaabulo noloshaada xiddigiska si aad u guuleysato!
Falanqeyn Eattic Synastry iyo Iswaafajin. Sinastry Kacsi, Xirfadle, Waalid iyo Cunug, Saaxiibtinimo iyo xiriir kasta.
Magaalada ama Tuulada
Ku qor magaalada ama tuulada (iyo codka haddii aad ku qorto Griig mid yar ama mid weyn) sugna inta ay ka muuqaneyso ilbiriqsiyo ka dib sanduuqa furmaya markaad joojiso qorista. Haddii magaalo ama tuulo aysan muuqan, ku qor xarfaha Ingiriisiga, iyo / ama xulo Wadan sanduuqa kore. Waxaad sidoo kale qori kartaa kaliya xarfaha ugu horeeya magaalada oo aad sugi kartaa natiijooyinka inay u muuqdaan in la xusho.
Hadaadan dooran wadanka oo aad isticmaasho aduunka oo dhan waxaad sidoo kale qori kartaa wadanka si aad uyareeyso natiijooyinka. Mareykanka kaliya nooca Mareykanka oo Mareykanka maahan. Tusaale ahaan haddii magaaladaadu tahay San Francisco, ku qor nooca
Haddii magaaladu tahay Washington maxaa yeelay waxaa ku badan Washington, waxaad sidoo kale qori kartaa tusaale ahaan gobolka:
Laakiin hadaad horey u dooratay Wadan oo aad u isticmaasho Mareykanka tusaale ahaan ku qor kaliya magaalada / magaalada / tuulada oo ha ku soo qorin dalka.
Haddii aad isku daydo inaad raadiso magaaladaada oo qoraalku u muuqdo mid aan shaqeynayn, tusaale ahaan ma arki kartid giraangirta yar ee is rogrogaysa oo ku taal midigta baarka aad wax ku qorto, kaliya ku soo celi magaalada ama gadaal u dhig xarafka ugu dambeeya oo dib u qor.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Heshiiska Shatiga Gargaarka Ku saabsan